Ixesha lokucwangcisa ukubuyela esikolweni - Impilo-Ntle | Eyenkanga 2021
Izilwanyana Zasekhaya Ukuphuma Ekuhlaleni Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani, Iindaba Ukuzonwabisa Inkampani, Ukuphuma Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Impilo-Ntle Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Iindaba Iziyobisi Vs. Umhlobo Uluntu, Impilo Imfundo Yezempilo, Impilo Ulwazi Lweziyobisi
Eyona >> Impilo-Ntle >> Ixesha lokucwangcisa ukubuyela esikolweni
Ixesha lokucwangcisa ukubuyela esikolweni
Njengokuba ihlobo liqhubeka, abazali abaninzi baqala ukwenza uluhlu lwazo zonke izinto ekufuneka bezenzile ngaphambi kokuqala konyaka wesikolo. Ukufumana ngokwasemzimbeni umntwana wakho kufuneka ngokuqinisekileyo afumane indawo kuluhlu lwezinto oza kuzenza. Eli lithuba lakho lokuqinisekisa ukuba umntwana wakho usempilweni kwaye yonke into isendleleni — kwaye akukho nto iba yingxaki engakhange ibonwe.
Ngelixa i-2020 isenokungafani nomnye unyaka wesikolo, ukujonga impilo yomzimba kuhlala kuyinto ekhuselekileyo, nokuba iiklasi ziya kuba kwi-intanethi kwindawo yakho.
Awufuni ukuthatha ithuba nomntwana wakho, utsho ugqirha wabantwana UDanelle Fisher , MD, usekela-sihlalo wezonyango kwiziko lezempilo eProvidence Saint John eSanta Monica, California.
Ngaba umntwana wakho ufuna umzimba qho ngonyaka?
Oogqirha bathi ewe. Leah Alexander, MD, ucacisa ukuba kubalulekile ukuba ungatsiba unyaka xa kusenziwa ucwangciso lokuhlolwa komntwana wakho.
Iingxaki ezinje ngokukhula kakubi, ukutyeba okungalindelekanga okanye ukulahleka, kunye nemiba yengqondo echaphazela ukusebenza kwesikolo kunye nokuba sempilweni iyonke inokuphoswa, utshilo uGqirha Alexander, ongumcebisi kwezonyango. Umama Uthanda Okona kulungileyo .
Ukuba uhlala kwindawo ekuyo ngoku efumana ukuqhambuka kwe-COVID-19, I-CDC icebisa ukulibaziseka kukhathalelo lwempilo oluqhelekileyo-kodwa I-American Academy yoGqirha wabantwana (AAP) iyabongoza inkathalo engaguquguqukiyo. Kuhlala kuyinto elungileyo ukubona ukuba yintoni umboneleli womntwana wakho ayicebisayo.
Ngomhla wokuqeshwa, kuya kufuneka uhlale ekhaya ukuba ufumana iimpawu zecoronavirus. Qiniseka ukuba unxibe imaski xa usiya kwindawo yokhathalelo lwempilo, kwaye uhlale emotweni de kube lixesha lakho lokumisela ukunciphisa unxibelelwano nabanye kwigumbi lokulinda. Okanye, buza malunga nokukhethwa kwe-telehealth . Ngaphandle kokuqhambuka kwe-COVID-19, kubaluleke ngakumbi ukugcina izitofu zisemgangathweni.
Yintoni eyenziwa ngumzimba wesikolo?
Ngexesha lokuqeshwa kwesikolo esiqhelekileyo, ugqirha wabantwana uya kujonga oku kulandelayo:
Iimpawu ezibalulekileyo , kubandakanya uxinzelelo lwegazi, ukuphakama, ubunzima, isalathiso sobunzima bomzimba
Imbali yezonyango, kubandakanya nayiphi na imiba yokuhamba kwamathumbu, isondlo, ukulala, ucoceko lwamazinyo kunye nophuhliso
Imbali yonyango yosapho
Impilo yomzimba , uviwo luqinisekisa ukuba yonke into iyasebenza, njengamalunga namathambo
Imeko yomngcipheko weentliziyo , kubandakanya nayiphi na imbali yeengxaki zentliziyo yokuqala kumalungu osapho. Into esizama ukuyifumana kukuba ngaba kukho naziphi na izehlo zentliziyo ezenzeka ngexesha lokuzilolonga, neflegi ebomvu ebomvu enkulu, utshilo uGqirha Fisher.
Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kuthi aninike nobabini ithuba lokubuza nayiphi na imibuzo okanye nivakalise naziphi na iinkxalabo eninokuba nazo.
Nyaniseka kugqirha womntwana wakho malunga nembali yonyango lomntwana wakho kunye nembali yonyango yosapho lwakho. Olu lwazi lunceda oogqirha ukuba bafumane umfanekiso ocacileyo wempilo yomntwana wakho iphela-kunye nomngcipheko wabo wokukhula kweemeko ezithile okanye ukwenzakala okuthile.
Ukuba usandula ukuthatha umntwana wakho ukuya kumboneleli wokhathalelo lokuqala ukuze ahlolwe, kusenokungafuneki ukuba uphinde wenze enye ingqesho yesikolo ngokwasemzimbeni. Ukutshekishwa kwesikolo kunokwenzeka ukuba kuyafuneka ukuba awuzange umngenise umntwana wakho ukuze azokuhlolwa okanye ukutyelela umntwana kakuhle kunyaka ophelileyo.
Umzimba wesikolo xa kuthelekiswa nemidlalo
Ukuba umntwana wakho udlala umdlalo esikolweni, kunokwenzeka ukuba kukho imvume yokungena phaya, elinde utyikityo lwakho. Kwaye kukwakho nefom ekufuneka ityikityiwe ngumboneleli womntwana wakho, ukubasusa ukuba badlale umdlalo. Le fomu iyakucela ukuba uthathe umntwana wakho aye kwimidlalo ebonakalayo. I-AAP ibonelela ngesikhokelo kubaboneleli malunga nezinto zemidlalo kunye nokufikelela simahla kwiifom zokucoca ezemidlalo Apha .
Izinto zemidlalo kunye neefizili zesikolo zininzi ngokufanayo. Zombini zigxininisa ukubaluleka kwembali yezonyango egqibeleleyo, kubandakanya nayiphi na imbali yosapho yemicimbi enokuchaphazela impilo yomntwana.
Umzimba wezemidlalo uyilelwe ukukhusela umntwana kwimicimbi enokuthi ikhule ngexesha lezemidlalo okanye lomzimba, utsho UCarlos Uquillas , MD, ugqirha wezamayeza oyingcali kwezamayeza kunye nogqirha wamazinyo eCedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute eLos Angeles. Ke, elinye icandelo lezemidlalo livavanya umntwana ngemicimbi yamathambo enokubabeka engozini. Ukutyelela ezemidlalo kunokubonelela ngesikhokelo sokulindela ukhuseleko kunye nokuthintela ukwenzakala kwemidlalo ethile okanye iimbaleki ezineemeko zonyango ezinokuthi zichaphazele ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo.
Kwakhona, akuyomfuneko ukucwangcisa zombini imidlalo yomzimba kunye nokwenyama rhoqo kumntwana wakho. Ukuba kutshanje uthathe umntwana wakho wamsa kugqirha wabantwana ukuba amkhangelele rhoqo okanye emzimbeni, mhlawumbi ngekhe badinge imidlalo eyahlukeneyo yomzimba.
Ngokombono wezonyango, utyelelo olongezelelekileyo alunakufuneka ngaphandle kokuba umntwana avelise ingxaki yezonyango eya kuthi ichaphazele amandla akhe okudlala umdlalo, okt, ukwenzakala kwingozi yemoto, utshilo uAlexander.
Kodwa, musa ukulinda ixesha elide ukucwangcisa utyelelo. Awufuni kuphelelwa lixesha ngaphambi kokuba iifom zibuyiselwe kwisikolo somntwana wakho. Kungcono ucwangcise utyelelo ubuncinci iiveki ezintandathu ngaphambi kokuba umntwana wakho afanele ukuqala umdlalo okanye isikolo xa kunokwenzeka ukuba kubekho olunye utyelelo okanye unyango oluyimfuneko ukuze kugqitywe.
Ukuba ucinezelwe ixesha, ungandwendwela iklinikhi yokuhambahamba enika ii-physicals zesikolo, kodwa usenokuphelisa ukuhlawula epokothweni ezinye zeendleko. Ukongeza, iklinikhi yokuhamba ngekhe ibenayo iirekhodi zonyango kwaye isenokungabi nababoneleli abaqeqeshwe ngabantwana. UGqirha Fisher ubongoza abazali abahamba ngale ndlela ukuba baqiniseke ukuba bayalandelela kamva kunye nogqirha wabantwana wabantwana babo.
Ngaba i-inshurensi iyayigubungela imizimba yesikolo?
Inye kuphela into ekufuneka ungazikhathazi ngayo kukuhlawula ngokwasemzimbeni. Ngokwesiqhelo, i-inshurensi yakho yezempilo kufuneka igubungele iindleko zonyaka zomzimba okanye zokutshekishwa kunye nokugonywa komntwana wakho ngaphandle kwee-copays.
Ukuba awunayo i-inshurensi yezempilo, oko akuthethi ukuba kufuneka uyeke olu tyelelo lubalulekileyo. Iiklinikhi zempilo yoluntu zihlala zibonelela ngotyelelo simahla okanye ngexabiso eliphantsi. Inkqubo ye- Izixhobo zeZiko lezeMpilo le-HRSA inokukunceda ufumane iziko lempilo elikufutshane nawe. Yabelana ngemeko yakho nodokotela wabantwana womntwana wakho. Ezinye iiofisi ziya kubonelela ngezaphulelo kwintlawulo yemali.
FUNDA OKULANDELAYO: Umbona njani ugqirha ngaphandle kweinshurensi
Kwaye, ungandwendwela kwezempilo.gov okanye qhakamshelana nesebe lakho leenkonzo zentlalo ukufumanisa ukuba uyakufanelekela na ukufumana i-inshurensi yasimahla okanye yexabiso eliphantsi.
I-Dexamethasone vs prednisone: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
I-Oxycodone vs Oxycontin: Umahluko ophambili kunye nokufana
loluphi uhlobo lokuthomalalisa iintlungu endinokuluthatha xa ndikhulelwe
Ungakufumana njani ukuzalwa kolawulo lokuzalwa simahla
ukulahla i-toenail fungus ekhaya
Iziphumo zokutshintsha kweTylenol kunye ne-motrin
yintoni eqinileyo itylenol 3 okanye vicodin